Ji achọ igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ Manufacturers - China Ji achọ igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ Factory, Suppliers
Igwe anaghị agba nchara perforated Ibé akwụkwọ (0.3mm-8mm)
Ọkwa: 304 304L 304DQ 316 316L 201 202
Ọkpụrụkpụ: 0.3mm - 8.0mm
Igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ na-emepụta na a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke àgwà akara ule na-adabere na ojiji nke ngwaahịa. Nnukwu ngwaahịa dị maka akara nchara nchara dị iche iche. 1.4031 / 1.4037 (304 / 304L) bụ ndị a na-ahụkarị na nke a na-ejikarị arụ ọrụ nchara maka nchara nchara nchara. A na-emekwa mpempe akwụkwọ nchara nchara n'ọtụtụ dịgasị iche iche n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nhọrọ nhọrọ. Commonfọdụ ọsọ emechara na-ewu ewu na ahịa bụ 2B, # 3 Polish igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ, # 4 egbu maramara igwe anaghị agba nchara na # 8 Mirror Finish. Ihe a na-ejikarị eme ihe maka nchara nchara nchara bụ # 4.
Igwe anaghị agba nchara etching efere bụ na igwe anaghị agba nchara elu site chemical usoro, corrosion nke a dịgasị iche iche nke pattern.With 8K mirror efere, wiredrawing efere, sandblasting efere dị ka ala efere, mgbe etching ọgwụgwọ, elu nke ihe maka inwekwu nhazi, igwe anaghị agba nchara etching efere nwere ike mepụta obodo na ọka, ịbịaru, inset gold, obodo titanium gold na ndị ọzọ na mgbagwoju nhazi, igwe anaghị agba nchara etching efere iji nweta ụkpụrụ ìhè na ọchịchịrị na yi mmetụta.
Emkwanye ihe pụtara na imepụta ụfọdụ ụdị aghụghọ, echiche ma ọ bụ usoro dị n'akụkụ ọzọ dị ka akwụkwọ, akwa, ọla ma ọ bụ ọbụlagodi akpụkpọ anụ. Embossed anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ na-isi mere nke perforated metal na-eji na ọtụtụ ubi karịsịa na elu okporo ụzọ ebe. Usoro mmepụta nke mpempe akwụkwọ ndị a na-agụnye ịmegharị nke usoro dị iche iche na mpempe akwụkwọ. Fọdụ n'ime usoro ndị kachasị ewu ewu ị nwere ike ịchọ bụ osisi sida, osisi ọka, ọka akpụkpọ, ọka ihu igwe, na stucco.